महाशिवरात्रि महा–उत्सव: सद्‌गुरु को साथमा महाशिवरात्रि मनाउनुहोस् | ईशा योग केन्द्र
'शिव' सँगको अद्‌भुत रात
साँझ ६:१५ – बिहान ६:१५
ईशा योग केन्द्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण
फाल्गुन १७ गते
( १ मार्च, २०२२ )
महाशिवरात्रि, पवित्र पर्वहरूमध्ये एउटा विशाल अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व हो । वर्षकै सबैभन्दा अन्धकार रात, महाशिवरात्रिमा शिवको कृपाको उत्सव मनाइन्छ । शिवलाई आदिगुरु अर्थात् प्रथम गुरु मानिन्छ, जसमार्फत योग परम्परा शुरु भएको थियो । यस रातमा ग्रहहरू विशेष स्थितिमा हुने भएकोले, मानव प्रणालीमा शक्तिशाली रूपमा ऊर्जा स्वत: माथितर्फ प्रवाहित हुन्छ । व्यक्तिको शारीरिक र आध्यात्मिक कल्याणको निम्ति यस रातमा मेरुद्दण्ड (ढाड) सिधा राखी जागा एवं सचेतन रहनु असाध्यै लाभदायक हुन्छ ।
यस वर्ष महाशिवरात्रिमा टिकट को व्यवस्था गरिएको छ, अनि यस महा–उत्सवमा धेरै हदसम्म ध्यान प्रक्रियाहरू हुनेछन् । कुनै पनि श्रेणीमा आफ्नो सीट बुक गर्नुहोस् अनि गहन आध्यात्मिक अनुभवबाट अभिभूत हुनुहोस् ।
महाशिवरात्रि रातभरि चल्ने उल्लासमय उत्सव हो, जहाँ सद्‌गुरु मार्फत शक्तिशाली ध्यान प्रक्रियाहरू हुनेछन् साथै प्रसिद्ध कलाकारहरूद्वारा भव्य साङ्गितिक प्रस्तुतिहरू दिइनेछ । यस वर्ष अनलाइनबाट महाशिवरात्रि महा–उत्सवको आनन्द लिनुहोस् ।
निर्देशित शक्तिशाली ध्यान प्रक्रियाहरू
रातभरि विशेष साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू
(ख्याति प्राप्त कलाकारहरू)
मार्सल आर्ट्स साथै परम्परागत कलात्मक प्रस्तुतिहरू
(ईशा संस्कृतिका विद्यार्थीहरू)
(प्रकाश र ध्वनिको अद्वितीय प्रस्तुति, जसमा योगको उत्पत्ति दर्शाइएको छ)
महाशिवरात्रि पर्वले हामीलाई प्रकृतिको शक्तिहरूलाई हाम्रो कल्याणको निम्ति उपयोग गर्ने अद्वितीय अवसर प्रदान गर्दछ । ईशा योग केन्द्रमा रातभरि चल्ने उल्लासमय महाशिवरात्रि पर्वले हामीभित्र गहन र प्रखर आध्यात्मिक अनुभवलाई उजागर गर्नको लागि उत्तम माहोल तयार गर्दछ ।
महाशिवरात्रि को रातमा ग्रहहरू विशेष स्थितिमा हुने भएकोले मानव प्रणालीमा शक्तिशाली रूपमा ऊर्जा स्वत: माथितर्फ प्रवाहित हुन्छ ।
स्वयं उपस्थित हुनुहोस्
रातभरि चल्ने उल्लासमय उत्सव महाशिवरात्रि, ईशा योग केन्द्रमा भव्य रूपमा आयोजना हुन्छ । ईशा योग केन्द्र आत्म–रूपान्तरणको लागि शक्तिशाली स्थान हो ।
थप जानकारी >
प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत महाशिवरात्रिको रातमा हुने प्रस्तुतिहरूको आनन्द लिनुहोस् अनि ध्यान प्रक्रियाहरूमा भाग लिनुहोस् ।
प्रमुख टि.भी. च्यानलहरू (भारत)
महाशिवरात्रि उत्सव, हाम्रा सहयोगीहरू मार्फत टेलिभिजनमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिन्छ।
महाशिवरात्रिमा सद्‌गुरुद्वारा विशेष रूपमा प्राण–प्रतिष्ठा गरिने रुद्राक्षहरू सबैका लागि नि:शुल्क अर्पण गरिएको छ । आदियोगी शिवको कृपा घरमा भित्र्याउनुहोस्!
प्राण–प्रतिष्ठित रुद्राक्ष, घरमा नि:शुल्क प्राप्त गर्नुहोस्!
ईशा योग केन्द्रमा उपस्थित भएर सहभागी हुनुहोस्
फाल्गुन २४, २५, २६ गते
ललित कलाहरूको विशेषता र शुद्धतालाई बचाएर राख्न अनि ती कलाहरूको विविधतालाई प्रवर्द्धन गर्ने कोशिस अन्तर्गत, ईशा फाउण्डेशनले हरेक वर्ष तीन दिवसीय उत्सव 'यक्ष' आयोजना गर्दछ । यस उत्सवमा ख्याति प्राप्त कलाकारहरूद्वारा सङ्गीत र नृत्य प्रस्तुतिहरू गरिन्छ ।
फाल्गुन १७ ( १ मार्च, २०२२ )
महाशिवरात्रि रातभरि मनाइने उल्लासमय उत्सव हो । ईशा योग केन्द्रमा, बिस्फोटक ध्यान प्रक्रियाहरू साथै प्रसिद्ध कलाकारहरूको भव्य साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरूको साथमा महाशिवरात्रि मनाइन्छ । यस अद्‌भुत रातमा लाखौँ मानिसहरू सहभागी बन्नुहुन्छ ।
आदिगुरु को कृपा
महाशिवरात्रिको पावन रात्रिमा ईशा योग केन्द्रमा पाल्नु हुने भक्तालुहरूलाई प्रसादको रूपमा एक दाना रुद्राक्ष अर्पण गरिनेछ । एक लाख आठ रुद्राक्ष दानाहरूले पछिल्लो एक वर्षदेखि आदियोगीलाई सुशोभित गरेका छन्, जसमध्ये एक दाना रुदाक्ष भक्तालुलाई अर्पण गरिनेछ ।
महाशिवरात्रिको रातमा ईशा योग केन्द्रमा पाल्नु हुने भक्तालुहरूले सर्प सूत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ । तामाबाट बनेको सर्प सूत्र बायाँ हातको साइँली औँलामा लगाइनुपर्छ । यो औँठीले स्थिरता र खुसियालीको निम्ति सहायता गर्दछ ।
प्रदक्षिणा यस्तो प्रक्रिया हो, जहाँ कुनै शक्तिपीठ वा शक्तिशाली स्थानको ऊर्जा ग्रहण गर्नको लागि त्यसको चारैतिर परिक्रमा गरिन्छ । आदियोगी प्रदक्षिणा मार्फत तपाईं आदियोगीको कृपा प्रति ग्रहणशील बन्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईंमा परम–मुक्ति पाउने इच्छा प्रबल बन्न सक्दछ ।
अद्‌भुत रात महाशिवरात्रिको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुहोस् !
अथाह र अद्‌भुत सम्भावनाहरूले भरिएको रात, महाशिवरात्रिको निम्ति आफूलाई अधिक ग्रहणशील बनाउनको लागि महाशिवरात्रि साधना शक्तिशाली अभ्यास हो । सात वर्ष माथिका जोसुकैले यो साधना गर्न सक्नुहुनेछ।
'आदियोगी शिव' को बारेमा पढ्नुहोस्
शिव को हुन् ? के उनी भगवान हुन् ? वा मानव ? वा एउटा पौराणिक कथा मात्रै ? अथवा, यसको केही गहिरो अर्थ पनि छ ? आखिर, को हुन् शिव ? आउनुहोस् जानौँ... Goto page
बच्चाहरू, युवाहरू, गृहस्थहरू, सन्यासीहरू, जो कोहीका लागि शिव प्रिय छन् । आखिर, के कुराले शिवलाई यति विशेष बनाएको छ त ? आउनुहोस् जानौँ... Goto page
आदियोगी–शिव को बारेमा थप जानकारी, यहाँ जानुहोस् >